Astaamaha Cudurka Wadnaha
Beauty iyo caafimaad La-talinta dumarka
Cudurada kaadiheysta kaadiheysta ee haweenka - dhibaato ayaa dhacda marar badan. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in haweenka kaadimareenka ay aad uga gaaban yihiin ragga, sidaas darteed infekshanku si sahal ah ayuu u galaa kaadiheysta, taas oo keenaysa dhaawacyo infekshin leh oo ka yimaada xubintaan. Intaa waxaa dheer, cuduro badan oo kaadiheysta waxay u sabab yihiin hab nololeed khaldan, nafaqo xumo, iyo cabitaan aan ku filnayn.
Inta badan annaga oo ogaanaya sida kaadiheysta u xanuunsan yahay, calaamadaha cuduro gaar ah waxaa loo yaqaana adag, iyo sidoo kale cudurada suurtagalka ah ee naftooda. Bal aynu eegno arintan.
Calaamadaha cudurada saameynaya kaadiheysta
Calaamadaha cudurka neerfaha ee kaadiheysta
Cudurka neerfaha wuxuu ku badan yahay dadka da'da ah. Calaamadaha ugu muhiimsan ee cudurkani waa in derbiyada kaadiheystu ay xanuujiyaan, lumiyaan lafdhabarta, iyo sidoo kale qashinka kaadiheysta. Bukaanku waxay ka cabanayaan inay rabaan inay kaadiyaan sabab la'aan, badanaa iyo inta badan iyada oo aan natiijooyin lahayn. Badanaa waxaa jira xaalado isku-xirnaan la'aanta kaadida, taas oo ah naxdin dhab ah, taas oo keenaysa ceeb, isku-kalsoonaansho.
Calaamadaha endometriosis kaadiheysta
Cudurkani wuxuu dhacaa inta badan natiijada endometriosis ee ugxan-yari , ilmo-galeenka. Waxaa la cadeeyay in unugyada endometrial, oo ay ku jiraan kuwa ay saameeyeen, ay "ku socdaan" iyada oo loo marayo jidhka haweeneyda, taas oo keenaysa endometriosis oo ah xubno kala duwan. Calaamadaha endometriosis, oo tixraacaya kaadiheysta, waxay dareemayaan culeyska qaybta hoose ee caloosha, taas oo kordhisa habka "maalmo muhiim". Kaadidu waxay noqotaa mid xanuun badan oo xad-dhaaf ah. Waxaa sidoo kale jiri kara dysuria, xanuun ku jira aagga ku habboon, kaas oo loo gooyo malawadka.
Kaadi-haysta kaadiheysta - calaamado
Haddii kaadiheystu qabato hargab, ka dibna luqadda sayniska waxay ka hadlaysaa dabaysha. Sida wax kasta oo caabuq ah, waxaa jira dareen joogta ah oo ka buuxa kaadiheysta kaadiheysta, dhiirigelinta kaadida ayaa noqota mid xariif ah. Kaadinta waa xanuun.
Calaamadaha kansarka kaadiheysta
Isku-boodhayaasha kaadiheysta waxay noqon karaan kuwo isku-buuqsan iyo malignantaba. Burooyinka waxay noqon karaan kuwa gudaha iyo kuwa sare. Calaamadaha kansarka kaadiheystu waa sida soo socota: muuqaalka muuqaalka dhiigga ee kaadida, xanuunka kaadida, xanuunka ku dhaca gobolka pubic, iyo si tartiib tartiib ah u sii faafa dhammaan qaybta miskaha.
Salt ee kaadiheysta - calaamadaha
Saledaha kaadida ayaa dhacaya, inta badan, sababtoo ah nafaqo-xumo. Caadi ahaan way ka soo baxaan kaadida, laakiin waxay joogi karaan oo sameysan karaan dhagaxyo. Calaamadaha cusbada ku jira kaadida waa midabka muruqa ee kaadida, isbeddel ku yimaada midabkiisa guduudan, casiraad joogta ah oo kaadida, xanuunka dhabarka hoose iyo xanuunka hoose.
Astaamaha calaamadaha xanuunka kaadimareenka
Cudurkani wuxuu isu muujiyaa kaadida joogta ah ee xanuun badan, gaar ahaan habeenkii, dareen joogta ah oo kaadiheysta aan la faaruqin.
Calaamadaha cudurka qaaxada ee kaadiheysta
Calaamadaha ugu muhiimsan ee tiibaydu waa maqnaashaha kaadida oo ay joogaan jiritaanka dhiigga nadiifka ah ee kaadida.
Calaamadaha cudurka maskaxda ee qoorta ee kaadiheysta
Miyuu leeyahay calaamadaha dhibka kaadida , cystitiska dabaysha iyo pyelonephritis. Kala soocidda kaadiheysta - calaamadaha marwalba la socda sclerosis of kaadi haysta.
Astaamaha caleemaha ee kaadiheysta
Marka ay jirto xaalad ay ku jirto maadada caanaha ee kaadiheysta, waxay u muuqan kartaa is-qabsi joogta ah, dareemid qashin ah habka kaadida.
Haddii aad kaadimid kaadiheysta kaadiheysta, calaamadaha waxaa laga yaabaa inay ku dhacdo isdaba joog iyo xanaaq badan si loo faaruqiyo kaadiheysta, taas oo aan soo saarin natiijooyin, kaas oo ku dhaca kiniin la'aanta kaadida.
Sida la arki karo, calaamadaha cudurka kaadiheystu waa isku mid. Kaliya haddii uu kaadiheystu qarxo, calaamadaha waxaa lagu sheegi doonaa xanuunka daran, ilaa shoog.
Baag caleen leh daahitaan bil kasta
Cadeecada nabarrada afka ilmagaleenka ee laser
La-dagaallanka ka-hortagga taranka haweenka
Astaamaha siilka ee iodine
Iska dhaafida derbiyada hoosta haweenka
Gonadotropin-sii daaya agonistayaasha hormoonka
Leukocytes ee kanaalka ilmo galeenka - caadiyan
Maxay u egtahay mudnaanta?
Endocervicosis ee afka ilmo-galeenka
Jabtada haweenka - calaamadaha aan qof walbaa ka hadlin
Aloe - daaweynta
Muuqaalada Emily Ratjakovski - Qishka
Waa maxay sababta aan loo ilaalin karin caadada?
Monarda - guryaha dawooyinka iyo ka hortagga
Jaketka haweenka ee xayiray
Dariishada daaqada akril
Sidee lumisaa miisaanka lugaha 3 maalmood?
Ceraxon - xalka afka
Sida loo aqoonsado daroogada daroogada?
Barnaamijka tababarka ee bilowga ah
Qeybo kala duwan
50 sano maaha xukun: Elizabeth Hurley iyo Sharon Stone waxay muujiyeen tirooyin heer sare ah ee dabaaldheer
Waraysiga Safaaradda Mareykanka
Sidee loo joojiyaa timaha lumis?
Hilibka foornada foornada - fikradaha cusub iyo kuwa asaliga ah ee loogu talagalay saxanka fudud ee qoyska oo idil
Rabshadaha miisaan lumis
Caanaha malab ah xilliga uurka
Jeebka carruurta loogu talagalay - siyaabaha ugu casriga ah ee lagu xalliyo qaniinyada
Matxafka Dhaqanka Dunida
Badda Krasnoyarsk - madadaalo by savages